दोलखा काङ्ग्रेस पुर्वसभापति न्यौपानेको रुखले किच्दा निधन
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति दोलखाका पूर्वसभापति एवं महासमिति सदस्य देवीप्रसाद न्यौपानेको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। तामाकोशी गाउँपालिका-३ को रैकर भन्ने ठाउँमा रुख ढल्दा रुखले किचेर उनको निधन भएको नेपाली काङ्ग्रेसले जनाएको छ। स्वर्गीय न्यौपानेको श्रीमति, २ छोरा र ५ छोरी छन्।
सुनसरी पुगेर देउवालाई पौडेलको प्रश्न : अदालतसँग सेटिङ हो? होइन भने किन अदालतले जे गर्छ त्यही हुन्छ भनिदैछ?
हृदयघातबाट मित्रसेन दाहालको मृत्यु, आजै अन्त्यष्टि गरिँदै
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगाका महासमिति सदस्य तथा जिल्ला कार्यसमितिका पूर्व सचिव मित्रसेन दाहालको निधन भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आज बिहान ९:४५ बजे ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको हो। हृदयघात भएपछि उनलाई ओम अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। २०१९ मंसिर ४ गते ओखलढुंगाको वरुणेश्वर—४…
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न बोहराटार पुगेका छन्। सोमवार दिउँसो देउवा पौडेल निवासमा पुगेको पौडेल निकट स्रोतले जनायो। झन्डै आधा घण्टा पौडेल निवासमा बिताएपछि देउवा त्यहाँबाट फर्केको र भेटमा के छलफल भयो भन्ने खुलेको छैन। पछिल्लोपटक कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडक आन्दोलनमा रहेको…